Duuliye dalkiisa Kosovo u raadinaya QM inay ka mid noqoto - BBC Somali
Duuliye dalkiisa Kosovo u raadinaya QM inay ka mid noqoto
27 Maajo 2011
Image caption Duuliye James waxa uu soo maray dalal badan oo caalamka ah
Duuliye James Berisha oo u dhashay dalka Kosovo oo ku duulaya diyaaradiisa yar ee Cessna 172 oo aduunka ku wareegayay tan iyo feberweri 2009 , soona maray 194 dal, ayaa gaaray gegida dayuuradaha ee Hargeysa.
Duuliye James Berisha wuxuu weriyaha BBC-da ee Hargeysa Axmed Saciid Cige u sheegay in mudadaasi duulimaadkiisa uu ugu raadinaayo dalalka uu tegay sidii wadankiisa Kosovo uu uga mid noqon lahaa Qaramada Midoobay.
Wuxuu sheegay in Kosovo oo xornimadeeda ka qaadatay Serbiya ay aqoonsadeen 75 dal oo ay ku jiraan Mareykanka iyo dalalka reer galbeedku laakiinse buu yiri weli aanu ka mid noqon dalka Kosovo Qaramada Midoobay.
Wuxuu sheegay duuliyahaasi in dalka Ruushku uu diidanyahay in Kosovo ka mid noqoto Qaramada Midoobay.
Duuliye James Berisha wuxuu ii sheegay inuu duulimaadkiisan wejiga labaad oo uu soo bilaabay Oktoober 2010 uu ku soo maray dalalka giriiga , Italy , Malta , Tuuniisiya , aljeeriya , marooko , Saxaaraha Galbeed, Moritaniya, Sengal, Gaambiya, Gini bisaw, Gini konnaakori , Siraliyoon ,iyo dalal kale ilaa uu ka soo gaaray Kenya , Ethiopia iyo Jabuuti oo uu uga soo gudbay Somaliland Hargeysa.
Wuxuu sheegay in kharashka ilaa iyo waqtigaasi uu duulimaadka ku jiray ee ka badan labada sannadood ay ka bixiyaan shacabka reer Kosovo oo qaaraan u ururiya .
Dalka uu soo maray duuliyahaasi waxaa ka mid ah siduu sheegay Mareykanka oo uu ka bilaabayba , dalal ka tirsan laatiin Amerika iyo Yurub.